ရန်ကုန်တွင်ဆေးစစ်/ဆေးပြရန်ကောင်းသောနေရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရန်ကုန်တွင်ဆေးစစ်/ဆေးပြရန်ကောင်းသောနေရာ
Posted by evolution on Aug 18, 2011 in Copy/Paste | 14 comments
ဆိုဒ်ထဲကအဖွဲ့ဝင်များတော်တော်များများက ရန်ကုန်မှာဆေးစစ်၊ ဆေးပြတာတွေနဲ့ပက်သက်လို့ ရေးထားတဲ့ပို့လေးတွေကိုဖတ်မိတာကြာပါပြီ။
အခုလဲကျတော့မျိုးသမီးကို အမျိုးသမီးရောဂါနဲ့ပက်သက်လို့ ဆေးစစ်ချင်လို့ (လိုအပ်ရင်ဆေးပါတစ်ခါတည်းပြရမှာပေါ့) ရန်ကုန်မှာဆေးစစ်၊ ဆေးပြလို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေ ယုံကြည်လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေသိရင် လမ်းညွှန်ကြပါဦး။
ကျတော်က နယ်ကဆိုတော့မကျွမ်းကျင်လို့ပါ။ နယ်ကလူတော်တော်များများသွားဖြစ်တာကတော့ ၁၅ လမ်းနဲ့ကမ်းနားလမ်းတစ်ဝိုက်ရှိဆေးခန်းတွေ၊
ပြီးတော့ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ မဟာမြိုင်၊ SSC လိုနာမည်ကြီးဆေးခန်းတွေပေါ့။ အဲဒိဆေးခန်းတွေအကြောင်းကလဲ သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ ကြားနေမြင်နေရတာဆိုတော့ အခုကိုယ့်အလှည့်မှာ နားလည်တက်ကျွမ်းတဲ့သူတွေရဲ့ အကြံဥာဏ်ကိုလိုချင်လို့ပါ။
အမလေးနော် ဘယ်ဆေးခန်းမှာများ ပြဿနာတက်ပီလဲလို့ ။ပို့ စ်အသစ်လားမှတ်ပါတယ်။ဆေးစစ်တာများကွယ်—Sakura မဆိုးလောက်ဘူးလားလို့ ။ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခြင်းသာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါကြောင်း။မီးမီး မပါဘူးနော်. ပြဿနာဖြစ်ရင် ဟိ ဟိ
Sakura ကတော့ မဆိုးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်လူ ရိုးရိုးဖျားလို့ ဆေးရုံတစ်ခါတက်တာ Deposit ၂၀၀၀၀၀ အရင်တင်ရတယ် ။ သူကလည်း အဲဒီ့နေ့ က ၁သိန်း ခွဲပဲပါသွားတယ် ။ တော်သေးလို့ ဆေးရုံအုပ်နဲ့က နဲနဲရင်းနှီးနေလို့ ၅သောင်းကိုနောက်မှပေးလိုက်တယ် ။မရင်းနှီးသာမရင်းနှီးလို့ကတော့ ဖျားနေတဲ့လူနာဆေးရုံရှေ့ကပြန်လှည့်လာရမယ့် ပုံပဲ …… ဒါတောင် ရိုးရိုးဖျားတာနော်… ပြင်းပြင်းသာဖျားလို့ကတော့ …. …
အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း မပေါ်က အကယ်ဒမီ ဆေးရုံလည်း မဆိုးဘူး။
ဆေးခန်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုလည်း ကောင်းတယ်။
ပိုက်ဆံလည်း သိပ်ပြူးပြူးလန် မတောင်းဘူး။
ရောဂါ စစ်ယုံဆိုရင် ဆေးရုံ ဆေးခန်းတွေမှာ စစ်လို့ရတယ်။
ကိုယ်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဆရာဝန် သီးသန့် လိုင်းရွေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့။
ရောဂါ ရှာဖွေရေးဆိုရင်တော့ ဒေါက်တာ ဒေါ်တင်မေညွန့် အာရှတော်ဝင်မှာ ထိုင်တယ်။ မနက်ပိုင်း တနင်္လာ ကနေ သောကြာ အထိလား မသိဘူး။ လူနာကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ကြည့်ပေးတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် မှန်မှန်နဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ကုပေးတယ်။
ရွှေဘုံသာလမ်းမှာ ဆိုရင် အေးဆေးခန်းကောင်းတယ်။ဆေးခဈေးကြီးသော်လည်း ၀ါးခကသိပ်မယူပါ။စမ်းသပ်ခ ဆေးထိုးပြီးတာမှ ၂၀၀၀ ပဲရှိပါတယ်။
ဆေးရုံ ၊ ဆေးခန်းတွေက ဆေးဖိုးရယ် ၀ါးခရယ် သပ်သပ်စီယူကြတာလား ဟင် ??
ဆေးစစ်၊ ရောဂါရှာဖွေ ရောဂါကုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အလှူငွေလည်း နည်းနည်းပဲ ထည့်ရပါတယ် သံဃာ့ဆေးရုံ ပြင်ပ ဌာနကို အရင်ဝင်ပြလိုက်ပါ။ စနေတနင်္ဂနွေကတော့ ပြလို့မရပါဘူး။ ပိတ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းလည်းသက်သာ ဆက်ဆံရေးလည်း ပြေပြစ် နည်းနည်းစောစောသွားရင် မတန်းစီရပါဘူးရှင်…
အင်းဟုတ်တယ်.. ဆေးဖိုးက ၁၀၀၀၀၀ ဆိုရင် ၀ါးခက ၂ ဆ ပေးရတယ်….. အဲဒါမပေးရင် ဂရုမစိုက်ဘူး ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတိုင်းပဲ
အမျိုးသမီးရောဂါနဲ့ ပတ်သတ်လျှင်တော့ .. ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံ ပြင်ပလူနာဌာနမှာ သွားပြနိုင်ပါတယ် … ။ အပြင်မှာက ပိုက်ဆံပေးရတယ် အချိန်ကုန်သက်သာတယ်ဆိုပေမဲ့ … တနိုင်ငံလုံးက အမျိုးသမီးရောဂါတွေ အတွက် အဲ့ဒီဆေးရုံမှာ ပါရဂူတွေ ၊ အိုဂျီတွေ ၊ ထိပ်တန်းသမားတော်ကြီးတွေ ထိုင်တယ် … ။ အဲ့ဒီမှာ သွားပြပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် … ။ တချို့ လည်း မသွားချင်ရဘူး … ဘာလို့လဲဆိုတော့ … စောင့်ရမှာစိုးတာရယ် ပိုက်ဆံများများ ပေးမှ သန့်တယ် ကောင်းတယ် ထင်တာရယ်တွေကြောင့်ပါ ပဲ ။
Evolution ရေ ခုလို ဝိုင်းကူညီထားကြတော့ အဆင်ပြေနိုင်ပီထင်ပါတယ်ကွယ်။ပိုက်ဆံတော့ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိထည့်ခဲ့ပါ။အနည်းဆုံးလိုင်းကားခလေး၊တက္ကစီဖိုးလေးပေါ့. ဟိ ဟိ
ဆေးခန်းပြရာမှာ ဆရာဝန် ကိုလည်းရွေးချယ်ရသလို ဆေးစစ်တဲ့ ဆေးခန်းလဲအရေးကြီးပါတယ်
ဓါတ်မှန် သွေး ဆီး ၀မ်း …အစရှိသလိုစစ်တဲ့နေရာမှာ စက်ပစ္စည်းကြောင့်လဲ အလွဲအမှားတွေရှိတတ်ပါတယ်
ကိုယ်တွေ့ပါ……တလွဲအဖြေတွေဖြစ်နေလို့ ရောဂါတခြား ဆေးတခြား ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်..
ပေါ်ကကွန်မန့်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေ၊ အကြံဥာဏ်ကောင်းပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကို တစ်ကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ အမှန်ဆိုရင် အပြင်ဆေးခန်းတွေရဲ့ ကျော်ကြားပုံတွေသာကြားနေခဲ့ရတော့ တစ်ကယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံလိုမျိုး တစ်ကယ်သက်ဆိုင်မဲ့နေရာတွေကိုမေ့နေတာ။
အခုလို ထောက်ပြ၊ ရှင်းပြပေးတာတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အပေါ်ကကွန်မန့်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေ၊ အကြံဥာဏ်ကောင်းပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကို တစ်ကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ အမှန်ဆိုရင် အပြင်ဆေးခန်းတွေရဲ့ ကျော်ကြားပုံတွေသာကြားနေခဲ့ရတော့ တစ်ကယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံလိုမျိုး တစ်ကယ်သက်ဆိုင်မဲ့နေရာတွေကိုမေ့နေတာ။